Boliska Kenya oo sheegtay inay qabteen Somali lagu tuhunsan yahay inay qaraxyo ka geysan lahaayeen Nairobi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Boliska Kenya oo sheegtay inay qabteen Somali lagu tuhunsan yahay inay qaraxyo ka geysan lahaayeen Nairobi.
By farsamada	 On Jan 11, 2017
Warbaahinadda Maxaliga ee Kenya ayaa shaaciyey inay Boliska gacanta ku dhigeen Labo nin oo Somali ah, kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay inay qorsheynayeen weeraro ay ka geystaan Caasimadda dalkaasi ee Nairobi.
Warbaahinta waxay soo xigteen Hadal-qoraal oo uu soo saaray Afhayeenka Boliska ee dalkaasi, George Kinoti oo uu ku faahfaahiyey eedeymaha loo haysto Labada nin oo magacyadooda lagu kala sheegay C/fataax Nuur Cali iyo Faarax Saalax Aadan.
Afhayeenka waxa uu tilmaamay in C/fataax Nuur Cali lagu qabtay magaalladda Nairobi maalintii Sabtida ee la soo dhaafay, isagoo watay Warqadda Aqoonsiga ee Kenyanka iyo Aqoonsiga Qaxootinimadda oo la been abuuray, waa sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale, Eedeysanaha Labaad ee Faarax Saalax Aadan ayaa isagana la sheegay in lagu qabtay magaalladda Garissa.
Dhinaca kale, Hadal qoraal oo ka soo baxay Xafiiska Taliyaha Boliska Kenya ayaa lagu xusay inay Labada Eedeysane ka mid yihiin dadka ay Hay’addaha Kenya sida aadka ah loo raadinayey, isla markaana lagu qabtay Dukumentiyo badan oo la been abuuray, waa sida hadalka loo dhigay.
Qoraalka waxa uu ku eedeeyey inay raggaasi qorsheynayeen Weeraro ay ka geystaan goobaha Madadaalada iyo Kaniisadaha, waa sida lagu xusay Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Taliyaha Boliska Kenya.
Dhinaca kale, Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay inay jiraan dad kale oo jaal la ah ragga la qabtay, kuwaasi oo la xusay in laga yaabo inay u gudbeen Somalia.
Xildhibaan Somali-Canadian loo magacaabay Wasiirka Socdaalka, Qaxootiga iyo Muwaadinnimadda ee dalkaasi.